Fanafihan'ny fahazavana ny resaka buzzwordsmithiness amin'ny fifandraisana | Martech Zone
Ny namako tsara nandritra ny taona maro dia Steve Woodruff, milaza tena (ary tena manan-talenta) Mpanolo-tsaina mazava, manohy mizara marketing-miteny somary mampihomehy eo amin'ireo tranonkala sy ny mombamomba ny media sosialy. Nizara ny azy izy ankafizin'ny fotoana rehetra miaraka amiko, roa taona lasa izay:
Nanomboka ny maodely vaovao izahay ho an'ny fitomboana maharitra, ateraky ny mpanjifa mifototra amin'ny fitsipiky ny rafitra adaptive sarotra. Ity dia fotokevitra vaovao ho an'ny paikady ho an'izao tontolo izao miova fanovana lalina: hevitra samihafa momba ny famoronana sanda, làlana samihafa mankany amin'ny fampivoarana ny tsena sy ny asa aman-draharaha, fehezan-kevitra samihafa ahitanao sy eritreretina. Ny tontolo iainana no fototry ny fifaninanana. Ireo orinasa mahay mametraka ny toerany sy mitantana ny tenany ho toy ny sehatra ho an'ny fandaminana samirery dia mety hahatonga ny fitomboana toa an'i Google saika voatosika modely.
Inona no dikan'izany? Betsaka ny teny ary tsy hitako izay fantarina.
Efa ela aho no te hanoratra an'ity lahatsoratra ity, ary omaly ilay namako akaiky hafa, Mark Schaefer, no nampisy. marika nizara ilay byline marika Palmolive, Fanafihana grefy amin'ny fifandraisana.
Noho izany ny anaran'ity lahatsoratra ity… Manantena aho fa tsy mampaninona an'i Marka fa nangalatra ilay hevitra tao amin'ny lahatsorany Facebook aho. Oh, ary tokony marihina tsara fa ny fonenan'i Mark dia orinternet.com… Mazava ve izany?
Ny fifampizarana ara-tsosialy nataon'i Steve dia efa naharitra herintaona mahery tamiko. Ny tranonkalan'ny masoivohonay dia fitambaran-teny fehezanteny mahazatra izay mety hahagaga ny mpanao bilaogy mahavariana indrindra. Isaky ny mizara andian-teny tsy misy fotony avy amin'ny tranokala i Steve dia hitako fa nanokatra browser aho mba hahazoana antoka fa tsy azony ilay izy DK New Media!
Vokatr'izany dia voatosika aho hanao manamboatra ny pejy fandraisana. Tonga ao an-tsaiko ny antony manohizan'ny orinasa mampiasa ny maso ivoho, ary nanjary zavatra iray daholo izany… manamboatra izay simba amin'ny marketing amin'ny Internet izy ireo. Saingy tsy zavatra iray foana izy io… indraindray ny marika, indraindray ny kopiany, indraindray ny laharan'ny fikarohana. Vokatr'izany dia nanoratra script kely mahafinaritra aho izay manolo teny iray monja ao amin'ilay fehezanteny.
Ny verbiage vaovao, voafaritra mazava, dia:
Ny marketing nomerika anao dia tsy mitondra fiara __________. Amboarintsika izany.
Ny teny izay atsindrinay dia Vokatra, laza, laharana, mpitsidika, fahefana, mitarika, mpanaraka, vola miditra, misintona, fandraisana an-tanana, fisoratana anarana, ROI, fahatsinjovana, fiovam-po, mpamaky, fampiasana, mpijery, fiakarana, mpankafy, fampisehoana, fivarotana, fitazonana, fisoratana anarana, fidiram-bola, fanentanana, ary fangatahana.
Mazava ho azy, azoko atao ny misafosafo momba ny fizotrantsika efa voaporofo sy miandry ny patanty hampitomboana ny fahamatoran'ny mpanjifanay (tantara marina)… fa inona no tena izy midika? Midika izany fa manamboatra izay tsy mety isika. Ao anatin'ny fifandraisanay rehetra misy, dia io no ifantohan'ny sainay sy izay tianay hifantoka amin'ny mpanjifanay ihany koa. Tianay antoka fa mamantatra ireo banga amin'ny paikadin'ny varotra ataon'izy ireo izahay, ary manampy azy ireo hameno ireo banga ireo hampandroso ny orinasany.
Tsy fantatro fa ny fanatanjahan-tena hahazoana fanambarana mazava sy mazava dia momba ny fanesorana na fampihenana ny teny. Izany dia mety ho fampihetseham-batana iray izay afaka manampy anao hiteraka fahazavana amin'ny varotrao sy ny fitaovanao manokana. Mino aho fa ny dingana nandehanako dia nifantoka tamin'ny zava-bitanay ho an'ny mpanjifantsika fa tsy mifantoka amin'ny hoe iza izahay ary inona no azonay atao. Taona maro lasa izay, nanoratra momba ny orinasa teknolojia foana aho marketing dia manasongadina tombony bebe kokoa.
Rehefa mifantoka amin'ny zavatra azonao atao ianao fa tsy ny zava-bitao ho an'ny mpanjifanao dia heveriko fa rehefa tsy mandeha tsara ny fametahana ny teny!
Tags: fahefanafanentananamazavafiovam-ponycopywritingfangatahanaDownloadsandraikitrampankafympanara-diaLeadsMark Schaeferfampisehoanatombonyfanantenanafilaharanampamakynisoratra anaranalazaResultsfihazonanaFidiram-bolaROIFanamafisana ny varotraSign-dehibesteve WoodruffUpsellsUsagempijerympitsidika
Dec 22, 2016 amin'ny 11: 52 AM
Tena tiako ny nataonao tamin'ny pejy fandraisam-bahiny - indrindra ny “carousel” fanovana teny, izay hevitra tsy noeritreretiko hatrizay. Bravo!
Jeffry Pilcher | Ny marika ara-bola
Dec 26, 2016 amin'ny 11: 07 AM
Ireo mpivarotra ao amin'ny sokajin'ny entana / tokantrano dia mahatakatra fa ny zavatra amidinao dia tsy maintsy mamaha ny olan'ny olona. Ny varotrao dia tsy maintsy mamaritra ny olana ary manolotra vahaolana mahomby - mazàna amin'ny teny 5-10 latsaka. Noho ny antony sasany dia tsy mahatakatra an'io ny mpivarotra B2B. Ary amin'ny tranga maro, ny hafatra ara-barotra be olona indrindra dia avy amin'ireo vahaolana mivarotra varotra ireo.
Ny CEO sy ny copywriter ao amin'ny orinasam-pivarotana dia tia terminologie grandiose satria mahatonga ny asan'izy ireo ho lalina kokoa (ary mieritreritra izy ireo fa afaka mandoa vola bebe kokoa amin'izany). Raha ny marina, ny ankamaroan'ny tsy fananana mazava ary tsy manana fahatokisana hanao fampanantenan-tena - oh: "Hanampy anao hamaha ny olana X."
Raha tsy azonao lazaina amiko - amin'ny fehezanteny iray sy amin'ny teny Anglisy tsotra - inona no hataonao ho ahy, ny orinasako na ny fianakaviako, dia manana asa be sisa ianao.